IHaven on Hughes #2 Uxolo 2BR - imizuzu eyi-5 ukuya kwibala - I-Airbnb
IHaven on Hughes #2 Uxolo 2BR - imizuzu eyi-5 ukuya kwibala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGerry
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-18 Aga.
IHaven on Hughes #2 yindawo yezi mini, entsha ehlaziyiweyo nekhanyayo enamagumbi okulala ayi-2 kwikona epholileyo yeHermit Park, ekufutshane nesixeko kunye neendawo ezininzi ezinomtsalane eTownsville.
Iyunithi ibethwe ngumoya kwaye uza kufumana i-wi-fi yasimahla, kunye nayo yonke into oyifunayo ukuze le ndawo ibe likhaya elikude nekhaya.
1km ukuya kwiivenkile, 3km ukuya kwiQueensland Country Bank Stadium entsha - ikhaya leNorth Queensland Cowboys.
IKHITSHI ELINENTO yonke: Umphezulu wokupheka, ioveni, i-microwave, umatshini wokuhlamba izitya, zonke iimbiza neepani, iseti yeemela, iketile,
ithowusta INDAWO YOKUGCINA UKUTYA: Iti, ikofu, iswekile kunye neekomityi
INDAWO YOKUHLAMBA IIMPAHLA: Yahlula, ukhuselekile indawo yokuhlamba iimpahla yangaphandle neStoreroom. Umatshini wokuhlamba impahla, ii-hamper neendawo zokuhlamba iimpahla zangaphandle ukuze zihambelane nemozulu eshushu
UKUHLALA: I-Smart TV ekwaziyo ukungena kwiinkonzo zakho zokusasaza nokubukela nantoni na onokuyenza ekhaya; imidlalo yebhodi yezo ndawo zeholide zingenamsebenzi; idesika yeofisi, itafile yasekhitshini kunye nendawo eyaneleyo yokuphumla uze wonwabe.
IBHEDI 1: Uza kufumana ibhedi enkulu etofotofo enefenitshala entle newardrobe enkulu.
IBHEDI 2: Iibhedi ezimbini ezitofotofo ukuze kube lula ukulala kwindawo ebhetyebhetye. Eli gumbi linewardrobe enkulu/indawo yokugcina izinto.
IGUMBI LOKUHLAMBELA/INDLU YANGASESE: Igumbi lokuhlambela elitsha elinendlu yangasese enkulu, ishawa kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Zonke izinto zebhedi ziyafumaneka. Iseti yesibini yezinto zebhedi inganikezelwa xa kuza kuhlalwa iveki enye.
Umbuki zindwendwe ngu- Gerry